Orinasa sy mpanamboatra kilasy firafitry ny membrane China Zhenyuan
Ny firafitry ny membrane dia karazana maritrano sy firafitra mifangaro amin'ny rafitry ny rafitra, fitaovana matanjaka miovaova mihetsika sy paikady manampy amin'ny alàlan'ny fomba sasany mahatonga ny atiny hamokatra tsindry sasany, ary ny fihenjanana eo ambany fifehezana karazana habaka endrika, toy ny tena vatana, manarona firafitra na trano ary manana henjana ampy hanoherana ny enta-mavesatra ivelany tery eo anelanelan'ny karazana firafitra.
Ny firafitry ny membrane dia manapotipotika ny endrika maritrano maritrano madiodio, miaraka amin'ny maodely miavaka miolikolika tsara tarehy, fohy, velona, ​​henjana ary malefaka, tanjaka sy hatsaran-tarehy, manome fahatsapana vaovao sy vaovao ny olona. Ny firafitry ny membrane dia manana fahatsapana The Times. ary ny solontena dia andiam-pananganana, mekanika ara-drafitra, indostria simika tsara, siansa ara-nofo, teknolojia solosaina ho iray amin'ireo fampiharana interdisiplinera momba ny injeniera, manana atiny teknika avo lenta sy antso avo amin'ny zavakanto, ny endriny dia mety hisy fiovana tsy araky ny filan'ny endrika mari-pahaizana Miaraka amin'ny tontolo iainana ankapobeny, ny fananganana sary an'ohatra ny tetikasa, ary ny fampiharana azo antoka, ny fampiharana maro karazana. Fitaovana lehibe ho an'ny daholobe, toy ny rafitry ny tampon-kianja, efitrano fampirantiana, ivon-toeram-pivarotana, toeram-piantsonana, fotodrafitrasa , sns. Izy io dia azo ampiharina amin'ny fotoam-pialam-boly, fotodrafitrasa, lalantsara fidirana ary mari-trano na fananganana tranobe ngs, sns ..
Tombontsoa ho an'ny membrane:
(1) Halavany lava: Ny firafitry ny membrane dia manana lanja mavesatra sy haingam-pandeha tsara, izay afaka manafoana ny filana fanampiana anatiny, mandresy ny zava-tsarotra atrehin'ilay rafitra nentim-paharazana amin'ny fanatanterahana ny fananganana lava (tsy misy fanohanana), mamorona habaka hita be tsy misy ampinga ary mahomby ampitomboy ny faritra azo ampiasaina.
(2) ny kanto:membrane firafitra namaky ny alalan 'ny nentim-paharazana firafitra karazana, izay mifototra amin'ny maodely, loko, azo mitambatra amin'ny toe-javatra voajanahary, manome lalao feno ny sary an-tsaina ny mpanao mari-trano, dia namboarina araka ny hevitra ny nentim-paharazana maritrano sarotra ny mahatsapa ny miolakolaka ary ny loko isan-karazany, ary ny loko dia manankarena, manankarena vanim-potoana manankarena, maneho ny hakanton'ny firafitry ny rafitra. Jiro jiro miasa mba hamorona sary amin'ny alina mora foana, omeo olona iray hankafy ny hatsarana ankehitriny
(3) Toekarena: Ny fitaovan'ny membrane dia manana fandefasana hazavana maivana, izay afaka mampihena ny hamafin'ny jiro sy ny ora amin'ny antoandro ary mamonjy angovo; Ny fampitana jiro miloko amin'ny alina dia mety hamorona tontolo mahafinaritra. Ankoatr'izay, ny firafitry ny membrane dia azo ravana, mora mihetsika, indrindra amin'ny fananganana fampiharana vetivety amin'ny tranobe goavambe, ara-toekarena kokoa.
(4) fiarovana: Ny fitaovana horonantsary dia manana faharetana mirehitra sy fanoherana ny hafanana avo lenta, afaka mahafeno ny fepetra takiana amin'ny fisorohana ny afo; malefaka ny firafitry ny membrane, izay mahazaka famindra toerana lehibe ary tsy mora potraka. Ny firafitry ny membrane dia manana lanja maty mavesatra sy fampisehoana seismika tsara.
(5) Manadio tena: Ny fitaovan'ny membrane misy fonony miaro dia ampiasaina ao amin'ny tranon'ny membrane, izay tsy lasa miraikitra. Ny vovoka mianjera amin'ny ambonin'ny fonosin'ny membrane dia azo sasana voajanahary amin'ny ranon'orana mba hahatratrarana ny vokatra fanadiovan-tena tsara ary hiantohana ny fiainana serivisin'ilay trano.
(6) fetr'andro fohy: ny fanapahana ny diaphragm, ny famokarana tariby sy ny firafitry ny vy, sns dia vita ao amin'ny orinasa, mampihena ny fotoana fananganana, fa kosa miaraka amin'ireo firafitra na singa vita amin'ny beton mihamafy, sns. Mandritra izany fotoana izany, sorohy ny fananganana lakroa, ao amin'ny tranokala fananganana tariby fotsiny, rafitra vy ary ny fifandraisan'ny toerana fametrahana diaphragm sy ny fihenjanana ny fizotrany, noho izany ny fananganana tranokala, fametrahana haingana haingana, mifandraika amin'ny fetra fametraham-pohy fohy nentim-paharazana ho an'ny tetikasa.
(7) Fampiharana marobe: Raha ny fahitana ny toetr'andro dia azo ampiharina amin'ny faritra midadasika ny tranon'ny firafitry ny membrane; Raha ny refy dia mety ho kely toy ny lay na zaridaina tokana izy, na lehibe toy ny trano mahatratra an'arivony na an'arivony maro toradroa metatra. Nisy mihitsy aza ny hevitra momba ny fanakonana tanàna kely sy fampiharana ny natiora noforonin'olombelona.
Sary axonometrika firafitra
Sary axonometrika maritrano
Previous: Net Frame, Kilasy firafitry ny heterosexuel
Manaraka: Villa Design
Famolavolana firafitry ny membrane
Famolavolana sary firafitry ny membrane